पुरुषहरुको स्पर्म काउन्ट र पिता बन्ने क्षमतामा नराम्रो असर पर्छ धुम्रपानको आदतले – Sajha Pati
के धूम्रपानले पुरुषको शुक्राणु गणना र पीता बन्ने क्षमतालाई असर गर्छ ?
सिगरेटको लतले पुरुषको शुक्राणुमा कस्तो असर पार्छ ?
धुम्रपानकोे दुव्र्यसनमा पर्ने व्यक्तिलाई वास्तवमा बुबा बन्न समस्या हुन सक्छ ?
यहा पुरुषको यौन जीवनको लागि चुरोटको लत कत्ति खतरनाक छ र यसले वास्तवमा पीता बन्न गाह्रो बनाउँदछ भन्ने विषयमा केही स्पष्ठ पार्न खोजिएको छ ।
धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने सबैले राम्रोसँग बुझेका पनि छन् तर पनि धुम्रपान गर्नु युवाहरुमा बिस्तार बिस्तारै फेसन बन्न गएको छ । धुम्रपानले क्यान्सरको जोखिम धेरै बढाउँदछ । महिला वा पुरुषमा यौन जीवनमा नराम्रो प्रभाव पार्छ । तर यो स्त्रीहरु भन्दा पुरुषहरुको लागी अधिक हानिकारक हुन सक्छ । पुरुषहरुमा बाँझोपन बढ्न सक्छ भन्ने कुरा धेरै स्वास्थ्य विज्ञहरू विश्वास गर्छन् । धुम्रपानले पुरुषहरुमा समस्या उत्पन्न हुन्छ, जसले पुरूषको पीता बन्ने क्षमतालाई असर गर्छ ।
पीता बन्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका शुक्राणुको हो । धूम्रपान गर्नाले शुक्राणु संख्या कम गर्दछ । शुक्राणु जति स्वस्थ हुनछ यसको मादा अण्डाको साथ निषेचनको सम्भाव्यता उति बढी हुन्छ । तर विश्वभरि वैज्ञानिकहरूले गर्ने थुप्रै अनुसन्धानहरूमा सिगरेट पिउने मान्छेहरूमा शुक्राणु संख्या कम भएको देखाएकोछ र वैज्ञानिकहरू धुम्रपान न गर्न सल्लाह दिन्छन ।
यस बाहेक धुम्रपानले शुक्राणुको गुणस्तर कमजोर हुन्छ, शुक्राणुहरूको आकार बिग्रन्छ र गतिशीलता घट्छ । पुरुषहरूमा वीर्य उत्पादन त हुन्छ, तर शुक्राणुहरुको स्पर्म कम हुन्छ र गुणस्तर पनि राम्रो हुदैन । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यदि व्यक्तिले लामो समयसम्म धुम्रपान गर्छ वा धेरै चुरोट पिउँछ भने, यो लतले गर्दा उसको पीता बन्न सक्ने सम्भावना कम भएर जान्छ ।
कसरी सिगरेट शुक्राणु लाई असर गर्छ ?
अनुसन्धानका अनुसार धूम्रपानले शुक्राणुको गुणस्तर र कन्सट्रेशन १३ प्रतिशत सम्म कम गर्न सक्छ । शुक्राणुको डीएनए बिगार्न सक्छ, जसले शुक्राणु अण्डाहरूसँग मिलेर फर्टिलाईज गर्दैन । शरीरमा भएका धेरै हर्मोनहरूको सन्तुलन बिगार्दछ । यी हार्मोनलको असन्तुलनले पुरुषहरू पीता बन्न सक्ने सम्भावनालाई समेत बिगार्न सक्छ । स्पर्मको आकार बिगार्न सक्छ, स्पर्मलाई तैरिन र अण्डासम्म पुग्न गाह्रो बनाउँदछ । लगातार धूम्रपानले पुरुषको वीर्यमा धेरै कम स्वस्थ शुक्राणुहरु जिवित हुन्छन्, जसले बुबा बन्ने सम्भावनालाई कम गर्दछ । धुम्रपान गर्नेहरूमा शुक्राणुको जोखिमको गति पनि १३ प्रतिशतले कम हुन जान्छ । यसका कारण फर्टिलाईजेशन पूर्ण हुन पाउदैन र पुरुषहरू पीता बन्नबाट वञ्चित हुन सक्छन् । यो मात्र होइन, धुम्रपानको लतले पुरुषको यौन जीवनलाई पनि असर गर्छ । यसले धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ जस्तै लिङ्गमा उत्तेजनाको अभाव, शीघ्रपतन, लिङ्गमा कम्प्रेसनको कमी आदि ।
धुम्रपान छोपछि कति दिनमा सामान्य हुनसक्छ ?
अनुसन्धानका अनुसार जुन मानिसहरुमा धुम्रपानको लत छरे माथि उल्लेखित समस्याहरु छन् भन यदि त्यस्ता मानिसहरुले धुम्रपान गर्न छोडे भने उनीहरुको यौन जीवन र प्रजनन क्षमता सामान्य हुन सक्छ । तर डाक्टरहरू भन्छन् ३ महिना पछि सिगरेट पूर्णतया छोडे पछि यसको प्रभाव शुक्राणुमा देखा पर्न थाल्छ र कहिलेकाँही समस्या पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन धेरै बर्ष लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले जीवनको आनन्द लिन र पीता बन्नको लागि पूर्ण रूपमा सिगरेटको लत छोड्नु पर्छ ।-onlymyhealth
एरोपोनिक प्रणालीबाट ट्राफिक आइल्याण्डमा फूल फुलाउने त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज